Izimbali | Okthoba 2021
Umhlahlandlela Wokukhula Kwezimbali Zonyaka
2021 | Ezithunyelwa Paul Adams | Isigaba: Izimbali
Kulesi umhlahlandlela okhulayo wezimbali ezibonakalayo zonyaka, funda ukuthi ungazitshala kanjani izimbali ezinhle noma ngabe yisiphi isikhathi sonyaka.
I-Kalanchoe Blossfeldiana: I-Katy Flaming Flaming
I-Kalanchoe blossfeldiana, eyaziwa nangokuthi i-flame katy, iyisimangaliso sokuqhakaza ebusika. Umqondisi wethu ukufundisa izindlela zokunakekela ezifanele!
USalvia Chamaedryoides: Ungayikhulisa Kanjani iGermander Sage
Ukukhulisa i-germander sage, uSalvia chamaedryoides, ikwenza ukwazi ukuletha umbala kwi-xeriscape emelana nesomiso. Sinikeza ngamathiphu akhulayo!
Imbali Yenhliziyo Eyopha: Ukunakekelwa Kwe-Dicentra Spectabilis
Imbali yenhliziyo eyophayo ingenye yemvelo ingcebo encane. Funda ukuthi ungayinakekela kanjani, uyisabalalise, uphinde uyibeke kabusha kulo mhlahlandlela wesitshalo ojulile.
Isilver Dollar Dollar (Lunaria Annua) Umhlahlandlela Okhulayo
Funda ukuthi ungakhulisa kanjani isitshalo sedola lesiliva, noma i-lunaria annua, engadini yakho. Ama-pods wezinhlamvu zesiliva azokwengeza izinga elisha lobuhle egcekeni lakho.
Ukunakekelwa KweLadder Plant Ladder: Kukhula TALL oluhlaza okwesibhakabhaka
Isitshalo sesitebhisi sikaJakobe kulula ukusikhulisa, sithanda umthunzi isikhathi eside. Funda ngezindlela ezinhle zokunakekela lesi sitshalo ngesiqondisi sethu esikhulayo!
Ama-orchid ngezinye zezimbali ezinhle kakhulu eMhlabeni. Funda ukuthi ungakhulisa kanjani ama-orchid we-hydroponic ukukhulisa ukukhula futhi ujabulele okuningi kwalezi zimbali ezinhle.
UGaura Lindheimeri: I-Beeblossom ekhulayo kaLindheimer
I-Gaura lindheimeri, noma i-beeblossom kaLindheimer, iyisikhathi esihle esinezimbali ezimise okwevemvane. Umhlahlandlela wethu okhulayo ukunika zonke izeluleko!
Ukunakekelwa kweLobelia Laxiflora: Ukukhula kweBush Lobelia yaseMexico
ILobelia laxiflora noma imbali yeKhadinali yaseMexico yisitshalo sezulu esomile esomile sezingadi ze-hummingbird.
Ukunakekelwa kukaRudbeckia Maxima: Ukukhula kwamaConeflowers amakhulu
I-Rudbeckia maxima noma i-coneflower enkulu iyimbali yasendle evikela izinyamazane okufanele uyikhule engadini yakho namuhla.
Izinsimbi Zokunakekelwa Kwe-Ireland: I-Moluccella laevis ekhulayo
Bathandwa ngokubukeka kwabo okusha nokuhehayo, iBells of Ireland isitshalo esithandekayo phakathi kwabathandi bengadi. Funda ukuze wazi ukuthi ungasitshala kanjani lesi sitshalo esiqhakazayo ekhaya lakho.
Izinkinobho zeBachelor: Ama-cornflowers nama-Blue Caps wokukhanyisa imibhede yakho
Enye yezimbali engizithandayo, izinkinobho ze-bachelor kwesinye isikhathi zibizwa ngokuthi ama-cornflowers. Futhi kusuka lapho lapho umbala 'we-cornflower blue' uthola igama lawo! Futhi Ufuna izimbali ezilula? Izinkinobho ze-Bachelor zizokunikeza uhla lwezithunzi kusuka ku-cornflower blue kuya kuma-pinks nakuphephuli! Funda ukuthi ulapha kanjani!
Izinhlobo Ezi-7 Ezidumile Zama-Orchid Ongakhula
Esikhathini esidlule, ama-orchid ayengavamile. Akusenjalo! Lezi zinhlobo ezingama-7 zama-orchid kulula ukuzinakekela kunalokho ucabanga, ngakho kungani ungazikhulisi?
UBlack Eyed Susan: Ungakhula kanjani futhi unakekele izitshalo zeRudbeckia
Uma ungathanda ukutshala i-susan eyed black noma ezinye izitshalo zezinhlobo zeRudbeckia, umhlahlandlela wethu uzokukhombisa ukuthi ungazikhulisa kanjani futhi uzixazulule kanjani!
Izimbali Zasehlobo ezingama-40 + Okufanele Ube Nazo Engadini Yakho
Funda ukuthi ungatshala kanjani izimbali ezingapheli eziqhakaza lonke ihlobo, kufaka phakathi izithombe zezimbali zasehlobo nezeluleko ezikhulayo.
Ukukhula kwe-asters kuyindlela enhle yokuqalisa engadini yezimbali. Ama-asters kulula kakhulu ukuba akhule futhi engeza okuhle engadini yasehlobo!
Izimbali ze-Phlox yizimbali ezimangalisayo ezinemibala ebomvu, epinki, onsomi, eluhlaza okwesibhakabhaka noma emhlophe. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ezinwabuzelayo phlox noma mounding phlox izinhlobo, kulula ukuba zikhule ngosizo umhlahlandlela wethu okhulayo!
I-Paisy Daisy: Ukukhulisa Inqwaba YePyrethrum
I-daisy ependiwe, i-tanacetum coccineum, iyimbali enhle ehlala njalo. Umhlahlandlela wethu womlimi ukutshela ukuthi ungawukhulisa kanjani ngendlela efanele!
I-Globe Thistle: Izimbali Ezindilinga Ezinhle, Eziningi
Thola imikhakha emangalisa yombala engadini yakho ngokukhula imbulunga yomhlaba! Umhlahlandlela wethu okhulayo uhamba nawe kulokhu okungapheli okukhula kalula.
I-Purple Passion Flower (Passiflora Incarnata) Ukunakekelwa Nezinzuzo
I-passionflower (passiflora incarnata), eyaziwa nangokuthi i-purple passion flower, iyimbali enhle enezinzuzo eziningi zezempilo. Funda ukuthi ungayikhulisa kanjani lapha.
i-serum engcono kakhulu yesikhumba esithandwa yinduna
umcamelo wentamo ongcono kakhulu kwabalele ohlangothini
kanjani ukuthola ubuso obucacile ngaphandle kwezinduna
izipho ezinhle kakhulu zezingane zomama abasha